Ahlusuna oo Dhuusamareeb la wareegtay iyo Faahfaahin Khasaaraha Dagaalka – SBC
Ahlusuna oo Dhuusamareeb la wareegtay iyo Faahfaahin Khasaaraha Dagaalka
Wararka Xilligan ka imaanaya Degmada Dhuusamareeb ee Gobolka galgaduud ayaa ku waramaya in degaanasho kooban laga dareemayo ka dib markii Dagaal xoogan oo Saacadihii la soo dhaafay ee Maanta galinkii danbe iyo caawa uu halkaasi ku dhexmaray Ciidamada culimada Ehlusuna & kuwa xarakada alshabaab.
Dagaal oo ahaa mid saacado badan socday ayaa waxaa Magaalada ay gacanta waqti kooban ugu jirtay Xarkada alshabaab wallow markii danbe ay si rasmi ah ula wareegeen Gacan ku hayta Magaalada Maamulka Elusuna walajameeca sida ay goordhow SBC International u xaqiijiyeen Dadka deegaanka oo aanu la xiriirnay.
Ma jirto faahfaahin labada dhinac ee dagaalamay ka soo baxday oo ku aadan Degaalka caawa ah halkaas ku dhexmaray iyaga iyo alshabaab waxaana iminka soo baxaya warar sheegay in ugu badnaan dagaalka ay waxyeelo ka soo gaartay 7 qof oo isku jira dhinacyada dagaalamaya iyo dad rayid ah oo kooxaha dagaalamay mid kood ay si toos ah toogasho ugu geysteen.
Xiriiro aanu isku daynay inaan la sameynayo Dhinacyada dagaalamay ayaa inoo suurtagali weyday.
Dadka Deegaanka ayaa cabsi iyo walaac ka qaba Dagaalada soo noqnoqday ee ay degmada dhuusamareeb wehelka u noqotay iyadoo xaalada deegaankaasi ay tahay mid mar walba dagaal filasho ku jirta.
Wixii warar ah ee ku soo kordha Kala soco SBC International Monitoring